Shirkaddaha Dahabshiil Group oo lagu Abaalmariyey Doorkii Weynaa ee ay ku lahaayeen Bandhiga Carwada Ganacsiga Somaliland | Baydhabo Online
Shirkaddaha Dahabshiil Group ayaa lagu Abaalmariyey Doorkii weynaa ee ay ku lahaayeen Qabsoomidda Carwadda ganacsiga siddeedaad ee Somaliland oo lagu soo gabo-gabeeyay magaalada Hargeysa, waxaana muddadii ay socotay carwadaasi ka dhex muuqday adeegyada Shirkadda Dahabshiil Group iyo sidoo kale hadyado iyo abaalmarino ay shirkaddu ku bixinaysay.
Shirkadda Dahabshiil Group ayaa Carwadaasi ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee ay shirkaddu u qabato bulshada, waxaana ka mid ahaa adeegyada shirkaddu bixiso ee carwadaasi sida weyn uga dhex muuqday Dahabshiil, Dahabshiil Bank, eDahab, Somtel iyo gaadiidka casriga ah ee Hyundai oo ay shirkaddu dalka keento.
Runtii dalkeenu wuxuu la ciirciirayaa baabuur mustacmal ah oo laga soo laastay, baabuurtaasi oo aynu la socono dhibaatada ay inagu hayaan, marka laga hadlayo dhaqaalaha, badqabka, caafimaadka iyo muuqaal ahaan ba.
Baabuurtan Hyundai waxa ay ka socdaan dhinaca bidixda oo ah nidaamkii sharciga ahaa, kharash ahaan marka ay noqotana wuxuu madhxinayaa qarash badan marka loo eego kharashkii kaga bixi jiray gaadiidka kale. Waxa ay leeyihiin dammaanad qaad shan sanno ah oo haddii ay wax ku yimaadaan ay shirkaddu masuul ka tahay, waxaanu diyaarinay adeegii ugu fiicnaa oo ah iibkii iyo qalabkii dayactirka iyo adeegii oo diyaar ah. Waxaanu ugu talo galnay baabuurtan in ay macaamiishu tijaabiyaan.”